ဘလော့ နည်းပညာများ ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
2:54:00 am ဘလော့ နည်းပညာမျာ3းcomments
ဘလော့သမားတွေ အတွက် ရှာရတာလွယ်အောင်လို့ပါ
တစ်နေရာထဲ အများကြီးလိုချင်တာ ရှာလို့ရတာပေါ့
►1-You Might Also Like ပုံလေးတွေထည့်နည်း
►2-Auto Read More လေးထည့်နည်း
►3-ဖိုင်တွေ-ပုံတွေတင်ဖို့ Hosting ဆိုဒ်များ
►5-ဘလော့မှာ Favaicon အလွယ်ထည့်နည်း
►6- Blog မှာ Content Warning ကို Remove လုပ်နည်း
►11- ချက်ဘောက်လေးကို ဘေးမှာသိမ်းထားခြင်လား
►13- ဘလော့မှာစာတန်းအပြေးလေးနဲ့ ရေးကြမယ်
►16- ဘလော့မှာ Floating Follow Button လေးထည့်နည်း
►17-ဘလော့ ခေါင်းစဉ် ထည့်နည်း နှင့် လင့်ချိတ်နည်းအပြည့်စုံ
►18-အခမဲ့ converter ဆိုဒ်လေးပါ
►20- ဘလော့ဧည့်ကောင်တာလုပ်နည်း (၁)
►21-ဘလော့မှာ Layout-Java Script မှာ ကုဒ်ထည့်နည်း (အသစ်များအတွက်သာလျှင်) ►22-မိမိရဲ့ဘလော့ မြန်မြန်လေးပွင့်သွားအောင်လုပ်ချင်ရင်
►23- ဘလော့မှာ Printer လေးထားခင်ြရင
►24-Freeshoutbox ဆိုဒ်လေးရဲ့ C-Box လှလှလေး
►25-C-Box ဖရီးလုပ်နိုင်သော ဆိုဒ် (၁၀) ခု
►26-Post Title အောက်က Author,label.time ဆိုတာလေးထည့်နည်း
►27-ဘလော့မှ ၀င်ဝင်တာနဲ့ ကြိုဆိုတဲ့ဘောက်လေးထည့်မယ်
►28-ဘလော့မှာ Post နဲ့ Comment အရေတွက်လေးသိခြင်ရင်
►29-ဘလော့အတွက် နောက်ခံ ကာလာ/ ပုံ တွေထည့်နည်း
►30-Recent Comments ပုံစံလေးတမျိုးနဲ့လှနေခြင်ရင်
►31-Auto Video Template လေးပါနော်..
►32- Google Translate အလံလေးတွေ ထည့်ကြမယ်
►33-ဘလော့ labels နောက်က နံပါတ်တွေ ဖြုတ်နည်း
►34-ChromeGT ဆိုတဲ့ အလန်းစား တက်ပလက်လေး
►35-post author, date, labels and comments တွေကို ပုံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်မယ်
►36- ဘလော့မှာ Comment ပေးတာလေေးတွ တင်ကြမယ်
►38-မိမိဘလော့ copy ကာကွယ်နည်း
►39-CherryTruffle ဆိုတဲ့ တက်ပလက်အလန်းလေးပါ
►40-အရမ်းလှတဲ့ Unite Template လေးပါ
►42-ဘလော့မှာ လှပသော Vertical Navigation Menu လုပ်နည်း
►43-မိမိတို့ဘလော့မှာ calculator လေးထည့်နည်း
►44-ChatWing ဆိုတဲ့ ချက်ဘောက် Cbox ထည့်နည်း
►45-ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ် လင့်ချိတ်နည်း အပြည့်အစုံ
►46-ဘလော့ Template ပြောင်းနည်း
►47-ဘလော့ Read More လုပ်နည်း ပုံဖြင့်အစားထိုးနည်း
►48-ဘလော့မှာ Drop Down Menu လေးလုပ်နည်း
►49-ဘလော့မှာ Social Subscribe Icons လေးထားကြမယ်
►50- Marquee code များနဲ့ ပျော်စရာ
►51-ဘလော့ search box လှလှလေးထည့်ဖို့
►52-ဆုံးရှုံးသွားသော Data, File များအား ပြန်လည် ရယူခြင်း
►53- ဘလော့မှာ Html ကာလာကုဒ် ထည့်နည်း
►54-ဘလော့မှာrelated posts widget လေးထည့်ကြမယ်.
►55-Run Box မှ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် shortcut များခေါ်ယူခြင်း (ဖတ်သင့်သည်)
►56-ဘလော့မှာ cloud menu လေးလုပ်နည်း
►57-ဘလော့မှာ Skin’s Social Media Listing Widget လေးထည့်မယ်
►58-ဘလော့မှာ post (atom) လေးဖြုတ်နည်း
►59-ဘလော့မှ fb like box လေးထည့်နည်းပါ
►60-Facebook Like Button လေးထည့်နည်း
►61-Magazine Dynamic view တွေကို read more လုပ်နည်း
►62- ဘလော့မှာ ကိုယ့်အကြောင်းလေးထည့်နည်း
►63- ဘလော့ ကွန်မက်အတွက် reply button လေးထည့်နည်းပါ
►66- Template Width ချဲ့နည်း
►67- Peekaboo Comments လေးများ လုပ်ကြမယ်..
►68-Address ဘားမှာ လိုဂိုလေးတွေထည့်မယ်
►71-Search Box ထည့်သွင်းပုံ
►72-Botton Page ပြုလုပ်နည်း
►76-ဘလော့မှာ ရန်စက်လေးထည့် တီးကြမယ်.. ရှယ်ဘဲနော်.
►77-ဘလော့ပေါ်မှာ တယော လေးတင်ပြီး တီးခတ်ကြမယ်
►79-Menu တွေ လင့်တွေကလစ်တာနဲ့ new lab နဲ့ထပေါ်အောင်လုပ်မယ်
►80-ဘလော့ရဲ့site feed လေးပြောင်းနည်း
►81-ဘလော့အောက်ခြေက power by blogger ဆိုတာကို အစားထိုးနည်း
►82-HTMLcode တွေကိုအရောင်းပြောင်းတဲ့ software
►83- WPA သို့မဟုတ် WPA2/PSK WiFi ဟက်နည်း
►85-ပရီးမီးယားလိဒ်ပွဲစဉ်ဇယားလေး ဘလော့မှာ ထားမယ်ဆိုရင်
►86-Stars rating ကို Blog Postတင်တိုင်း ပေါ်စေလိုက
►87- မိရဲ့ဘလော့Post က Read More ကိုပုံနဲ့အစားထိုးနည်း
►88-MouseOver Social Bookmark လေးထားချင်ရင်
►90- Menu Tab လုပ်နည်းများ
►91-Printer Friendly ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးများ ဖန်တီးခြင်း
►92- Popular Posts ကို slider လေးနဲ့ ဘလော့ထိပ်ကနေအလှဆင်မယ်
►93-ပို့စ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု နောက်ခံကာလာ မတူအောင်တင်နည်
►94-How to Add A Comment Count Bubble To Blogger Post Titles
►95-Flash နာရီလေးတွေ့ ဘလော့မှာ အလှဆင်ဖို့
►96-Google +1 button and Badge for Blogger
►98- မိမိဘလော့ပို့စ်မှာ ဓါတ်ပုံ မူဗီများးတင်နည်း
►99-Vertical Navigation CSS Menu များစွာပေးနေတယ်
►100-How to Backup/restore Blogger template
►101-ဘလော့ Template ပြောင်းနည်း
►102-Blog မှာ Slider တစ်ခု ပြုလုပ်နည်း
►103-မိမိဆိုဒ်ပေါ်ကလစ်တာနဲ့ပေါ်စေချင်တဲ့ ဆိုဒ်ကို ထပေ
►104-ဘလော့ဆိုဒ်မှာ ဘလော့ပိုစ့် တင်းနည်း ပုံစံ-၂ မျိုး
►105-Blogs အတွက် Themes ဆော့၉ဲလ်
►106-Ayar ပရိတ်သတ်များ အတွက်
►107-Blogger ထဲမှာ Yahoo player ထဲရအောင်...
►108-ဘလော့မှာ MP3 Player လုပ်နည်း
►109-ဘလော့မှာ အလွယ်တကူ အပေါ် အောက် ဆွဲတင်-ချ တဲ့ မျှားလေးထည့်မယ်
►111- Blog ရဲ့Label ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခေါင်းစဉ်ကလေးတွေပဲပေါ်အောင်
►112-Recent Posts & Comments
►113-Top to page arrow
►114-Playtagger နဲ့ သီချင်းတင်နည်း
►115- web space တခုဝယ်မယ်ဆိုရင်
►116-Image Menu လေးတွေဖန်တီးကြည့်ရအောင်
►117-Domain name ဆိုတာ..
►118-ဓာတ်ပုံတွေကို မူရင်းအရွယ်အစားအတိုင်း ပေါ်စေလိုလျှင်
►118- Menu Tab လုပ်နည်းများ - ပုံစံ (၁)
►121- What is Professional Blogging and How to? [2]
►122-ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးများတွင် Footnote ထည့်နည်း
►123-ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Site လေးတွေကို ဒီလိုစောင့်ဖတ်မယ်...
►124-ဇော်ဂျီ-ယူနီကုဒ် 5.1 ပြောင်း Box ထည့်ခြင်;
►125- Blogger Header မှာ Random,Rotating Images ထည့်နည်း
►126-Navbar ကို ဖျောက်ဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း
►127- Blogger Links တွေကို Rainbow Links တွေ အဖြစ်လွယ်လွယ်ပြောင်းနည်း
►128-ပို့စ်တွေကို Hightlight ပုံစံနဲ့တင်နည်း
►129-Blog မှာ Slider တစ်ခု ပြုလုပ်နည်း
►130-ဘလော့အဟက်မခံရအောင် ကြိုတင်ကာကွယ် ပြင်ဆင်နည်း
►131-shout Box ကို စာမျက်နှာဘေးမှာထားချင်ရင်
►132- Blogger Comment Box လေးမှာ Smileys ပုံလေးတွေ
►134- Blog လုပ်နည်း အပြည့်အစုံ
►135-ဘောလုံးပွဲစဉ် ဇယားလေး မိမိဘလော့မှာ ထည့်မယ်ဆိုရင်
►136-Post တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပိုင်းခြားပေးတဲ့ မျဉ်းကြောင်းလေးထည့်ချင်ရင်
►137- Lebalsရှေ့မှာRss Feed Link Buttonလေးထည့်နည်း
►138-Add Page Elements ကို Blog Header မှာထည့်ကြည့်ရအောင်
►139-ဇယားကွက်လေးနဲ့ စာလေးတွေ ရေးမယ်ဆိုရင်
►141-အခမဲ့ဘလော့ Tamplate ဆိုက်ဒ်များ
►142-အကောင်းဆုံးWordpress Themes ဆိုက်ဒ် ၇၉ ခု
►143- ဘလော့ Comment Box ကနေ၇ာလွတ်ကြီးကိုဖြုတ်နည်း
►144- ဘလော့ထဲမှာYoutube သီချင်းတွေကိုလွယ်ကူစွာထည့်နည်း
►146- ဘလော့ Post အောက်မှာ Add Location လေးထည့်နည်း
►147-ဘလော့ Post အောက်မှာ Add Location လေးထည့်နည်း
►148-့HTML အကြောင်း လေ့လာနိုင်စရာ (၂)
►149-မိမိဘလော့မှာ နောက်ခံ ကာလာတွေ စိတ်ကြိုက် ချိန်းနိုင်
►150-မောက်နောက်က စာတန်းလေး တကောက်ကောက်
►151-Zawgyi-Unicode Blog-page Font changer လေးထည့်ကြမယ်
►152-မိမိဘလော့ပို့စ်မှာ ဓါတ်ပုံ မူဗီများးတင်နည်း
►153-ဘလော့မှာ vertical navigation menu လေးလုပ်နည်း
►154-Search Box လှလှလေးဖန်တီးကြမယ်
►155-ခေါင်းစဉ် Menu လှလှလေး လုပ်လိုပါက
►156-Dropdown Menu လှလှလေးလုပ်ကြမယ်.
►157-ဘလော့ Error များအတွက် ဖြေရှင်းနည်း
►158-Blogs For Rainbow Link တဲ့နော်...
►159-ဘလော့မှာ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဘုရားးပုံတော်လေး
►160-ဘလော့မှာ Layout-Java Script မှာ ကုဒ်ထည့်နည်း (အသစ်များအတွက်သာလျှင်)
►162-ဘလော့ပို့စ်တွေမှာ Printer လေးထားကြမယ်
►163-Freeshoutbox ဆိုဒ်လေးရဲ့ C-Box လှလှလေး
►164-C-Box ဖရီးလုပ်နိုင်သော ဆိုဒ် (၁၀) ခု
►165-Post Title အောက်က Author,label.time ဆိုတာလေးထည့်နည်း
►166-ဘလော့မှ ၀င်ဝင်တာနဲ့ ကြိုဆိုတဲ့ဘောက်လေးထည့်မယ်
►167-ဘလော့မှာ Post နဲ့ Comment အရေတွက်လေးသိခြင်ရင်
►168--Search Box လေးအလွယ်ထည့်နည်း
►169-ဘလော့မှာ Floating Bar လေးထည့်နည်း
►170-Random Post Widget လေးနဲ့ အလှဆင်ကြမယ်
►171- Dropdown Menu အလွယ်ထည့်နည်း
►172-မှားဖျက်မိသော Post များ ပြန်ရှာနည်း
►173-Anomous အမည်ဖြင့် Comment ပေးမရအောင်
►174-Image Menu လေးတွေဖန်တီးကြည့်ရအောင်
►175-ပို့စ်တွေကို Hightlight ပုံစံနဲ့တင်နည်း
►176-Dropdown Menu လှလှလေးလုပ်ကြမယ်.
►177-ဆော့ဝဲလ်မလိုဘဲ ဒေါင့်လော့ Speed ကြှိုမှင့်တင်မယ်
►179-စာသားလေးတွေ အပေါ်သို့တက်သွားစေတဲ့ Marquee ကုဒ်
►180-ဘလော့ရဲ့ Newer Post......Home.....Older Post တွေအလုပ်မလုပ်ခဲ့ရင်
►181- မိမိဘလော့ကို Summit ပုံမှန် လုပ်ကြပါ
►182-မိမိဘလော့ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်ပြောင်းနည်း( c-box မေးမြန်းမှု)
►183-ဘလော့ခရီးသည်တင်ပြီးသမျှ နည်းပညာများစုစည်းမှု ကလစ်ပါ
►184-မိမိတို့ပို့စ်လေး အမြဲ ထိပ်ဆုံးကရှိနေစေခြင်ရင်
►185-ဘလော့တစ်ခုရဲ့ အရေးပါသော Importblog-Exportblog
►186-ဘလော့ Share လေးလှလှလေးလုပ်မယ်ဆို.
►187-ဘလော့ကာအတွက် Popup Subscribe Box လေးတွေ
►190-အခမဲ့ Button,Menu,Banner,Texts,Flash တွေသုံးနိုင်တယ်
►191- လင့်တွေကို Rollover Button လေးနဲ့သုံးခြင်ရင်
►192-ဘလော့ Template အသစ်ထည့်နည်း(C-B0x တောင်းဆိုမှု)
►193- ဘောလုံးဝါသနာရှင်များအတွက် ပွဲစဉ်ဇယားလေးများ
►194-ကိုယ့် Profile ကို ဘယ်သူတွေ ဝင်ကြည့်သလဲ
►195-ဘလော့မှာ facebook comment ရေးနိုင်အောင်
►196-Gmail Account ဖွင့်နည်း (နောက်တစ်မျိုး)
►197-Horizontal Menu လေးအလွယ်ထည့်မယ်
►198-Css Menu Bar လေးတည်ဆောက်ကြမယ်
►199-Scrolling Text - Marquee HTML Code လေးရေးနည်း
►200-ပြေးလွှားကစားနေတဲ့ Marquee ကုဒ်လေးတွေ လာပြီဗျာ
►201-ဘလော့မှာ Facebook Like Button ထည့်နည်း
►202-Button Hover Style လှလှလေးဖန်တီးကြစို့
►203-ဘလော့Header ပုံလုပ်ရန်အတ္ဂက် Xheader maker ဆော့ဝဲလ်
►205-အလွယ်ကူဆုံး Button Tab Menu ထည့်နည်းလာပြီနော်
►206-ဘလော့ရဲ့ resent post လှလှလေးထည့်ကြမယ်
►208-CSS Menu Generator လုပ်ရန်ဆော့ဝဲလ်လေးပါ
►210-Multi-Tabbed Widget လေးနဲ့ အသုံးပြုကြမယ်
►212-မြန်မာငွေကြေးအခြေပြလေး ဘေလာ့မှာ ထည့်မယ်
►213-ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Related Post လေးထည့်နည်း
►214-ဘလော့ကိုမြန်စေတဲ့ Loading Speed လေးလာပြီ.
►215-Never-Home-Older တွေကို ပုံလေးနဲ့ အစားထိုးနည်း(မျှဝေခြင်း)
►216-လင့်တွေကို မောက်တင်တာနဲ့ မောက်ပုံစံပြောင်းစေတယ်
►217-ဘလော့ရဲ့အလှဆင်တဲ့Lavalamp Menu လေးနော်
►218-Highlighted Background လေးနဲ့ ပို့စ်တင်နည်း
►219-Easy Menu For Your Blog
►220-ကုဒ်တွေကူးတာမပင်ပန်းရအောင် Select All လေးထည့်နည်း
►221-မောက်နောက်က လိုက်နေမဲ့ စာတန်းလေး
►222-မိမိဘလော့အတွက် Author ဖိတ်ခေါ်နည်း (အသစ်များအတွက်)
►223-မိမိ Gtalk မှာ ဘာသာပြန်စနစ်ထည့်နည်း
►224-ဘလော့စလုပ်သူများအတွက် post တင်နည်း
►225-ဘလော့ဖွင့်တာနဲ့ ဆီးကြိုတဲ့ alert-pop-up-box လေး
►227-SyntaxHighlighter (V3) သုံးပြီးပို့စ်တင်မယ်
►228-Related Post လေးတွေ ထည့်ကြမယ်..
►229-ဘလော့အတွက် Back To Top လေးတွေ +19 Style နော်
►230-ဘလော့မှာ Auto Refresh လေးလုပ်ခိုင်းကြမယ်
►231-Welcome Clock ဆိုတဲ့ နာရီအလန်းလေး
►232-Fast Car အမည်ရှိတဲ့ Template အလန်းလေး
►233-ဘလော့အတွက် နာရီ တွေအခမဲ့ပေေးနပြီ
►234-ဘလော့မှာ အသဲနှလုံးတွေ ကျလာမယ်
►235-Sidebar Tex ကာလာတွေ ပြောင်းကြမလား
►236-Blogger template - Float..few more versions
►237-Html ၀င်နည်းလေးပါ ( ဘလော့ကာအသစ်များအတွက်ပါ)
►238-Popular Post လှလှလေးဖန်တီးကြရအောင်
►239-မန်ဘာဝင်ခြင်းဖြင့် ကျော်ခွ ခြင်းမှ ကင်းစေရန်
►240-(Header)ပေါ်မှာ Add Page Elementထည့်နည်းလေးပါ
►241-CO.CC မှာ မုရင်း blogspot.com ပြန်ချိန်းနည်း
►242-Template ဒေါင်းယူပြီး xml ဖိုင်ရယူနည်း
►243-နောက်ဆုံးတင်သမျှ Slider Post လေးလုပ်နည်း( ရှယ်နော် )
►244-Read More လုပ်နည်း ( လန်းတယ်နော် သူကတမျိုးလေး)
►245-Scroll Bar နောက်ခံ့ာလာနဲ့ ပို့စ်တင်ကြမယ်
►246-X`Mas လက်ဆောင်လေး အမှတ်တရ လုပ်မယ်
►247-Template အလန်းများ ( ၁ )
►248-Beauty Template Chucky (သိပ်လှတယ်နော်)
►249-ဘာသာရေးဘလော့များအတွက် Domain အလှူဒါနပွဲ
►250-ဘာသာရေးဘလော့များအတွက် Domain အလှူဒါနပွဲအင်တာဗျူး
►251- မိမိဘလော့ပုံလေးနဲ့ကုဒ်ရောပါ လိုခြင်သူယူနိုင်ရန်
►252-ဘယ်-ညာ ဆိုဒ်ဘားနဲ့ သိပ်လှတဲ့ ProDesign Template
►253-Free Download Template For Blogger
►254-Right Click မရသောဆိုဒ်များအား ရအောင်လုပ်ယူနည်း
►255-မောက်တင်တာနဲ့ ရပ်တန့်စေတဲ့..Marquee ...ကုဒ်..
►256-Marquee ကုဒ်လေးတွေ နဲ့စာလဲရေးမယ် ပုံလေးလဲ ပြေးနေမယ်
►257-ဂျာနယ်ဆိုဒ်လေးတွေ ဘလော့မှာ ထားခြင်ရင်
►258-Perogato Wordpress Theme
Marquee အကြောင်းသိကောင်းစရာ (၂)
Marquee ကုဒ်အကြောင်းသိကောင်းစရာ (၁)
Template အလန်းစားများလာပြီနော် ( ၂ )
Template ဒီဇိုင်းများ ဒေါင်းရန် ( ၃ )
Home Page မှာ Post Title သာပေါ်စေခြင်ရင်
ဘလော့မှာ မီးပုံးလေးတွေ ပျံဝဲကျလာစေခြင်
Multi Color Advanced Css3 Menu
CSS3 Semi Opaque Menu For Blogger
မောက်စ်ရဲ့မြားပုံလေးအောက်မှာ မိမိရေးချင်တဲ့စာရေးပြီး ထားလို့ ရတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ
ဘလော့ပေါ်မှာ မိမိ အွန်လိုင်းရှိ/မရှိ ဆိုတာလေးထားမယ်
Green Colour Css Dropdown-Menu
Dropdown Menu လှလှလေးဖန်တီးကြမယ်
မိမိဘလော့ရဲ့ Loading Time ကိုစစ်ဆေးကြမယ်
ဘလော့မှာ အပေါ်မှ အောက်ကုဒ်လေး ( cbox တောင်းဆိုမှု)
ဘလော့မှာ ရေဒီယိုလေး (cbox တောင်းဆိုမှု)
android Device ပေါ်ကနေ blog ရေးလို့ရပြီနော်
ဖုန်းဆိုဒ်လေးတွေ တင်ခြင်ရင် ( ကုဒ်ပါအသင့်သုံးဗျာ)
Join This Site ဆိုတဲ့ မန်ဘာဝင်ရန်ဘောက်လေး ထည့်နည်း
ဘလော့ခရီးသည်ရဲ့ တက်ပလက် လေးပါဗျာ..(တောင်းဆိုမှုအရ)
လာပြီ ဘလော့ကာတွေအတွက် ချက်ခန်း (နိုင်ဆိုဒ်တွေနဲ့ဆင်တယ်..ေိေိ)
Search Box လှလှလေး လိုခြင်ယူလိုက်ကြပါ
ကိုယ့် Blog မှာ Facebook like box ထဲ့နည်း
ဘလော့ရဲ့ လင့်အမှားတွေ ပျက်တာတွေ စစ်ဆေးပေးတဲ့ Xenu's Link Sleuth V 1.3.8
Flash Animation Software လေးပါ (ဘလော့သမားတွေအတွက်ရှယ်)
ပုံတွေကို Imgur နဲ့ Upload လုပ်နည်း
Zippyshare နဲ့ Upload လုပ်နည်းလေး
UG အကလှလေးနဲ့ ပြက္ခဒိန်လေးးနော်
Android ဖုန်းကနေ ဘလော့ရေးတင်ကြမယ်...
Blog List လေးတွေကို စကိုးဘားလေးနဲ့ ဖန်တီးမယ်
IDM လည်နေတာလေးရဲ့ ကုဒ်ပါ (တောင်းဆိုခြင်းအတွက်)
မိမိရ့ဘလော့linkတွေကိုscrolling နှင့်လုပ်ချင်ရင် လုပ်ချင်ရင်
ဘလော့မှာ Favicon ပုံလေးထည့်ကြမယ်. (အသစ်များအတွက်)
ဖုန်းထဲမှာ ဖတ်နိုင်စေဖို့ ဘလော့ရဲ့ APK လုပ်နည်းလေးပါ
Java Program အကြောင်းသိစေဖို့ နဲ့လေ့လာလိုသူများအတွက် စာအုပ်
WORD to PDFပြောင်းပေးတဲ့ Softwareလေးပါ
မိမိကိုယ်ပိုင် ၀က်ဆိုဒ် ၊ ဘလော့များပေါ်တွင် ကြော်ငြာလက်ခံ၍ ၀င်ငွေရှာနိုင်သော အစီစဉ်များ Google Adsense ကြော်ငြာ
ဘလော့ကာ Favcon (or) Icon ကိုအလွယ်ဆုံးထည့်နည်းလေးပါ
Right Click ထောက်ရင် Open With မပေါ်တဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း
ဘလော့အဖွင့်မှာ Pop Up Box လေးထည့်ကြမယ်
ဘလော့စာမျက်နှာကို နံပါတ်လေးတွေနဲ့ ထားကြမယ်
Read More အလွယ်ကူဆုံးလုပ်ကြမယ် ( အသစ်များအတွက်ပါ )
ဘလော့နဲ့ ဖုန်းအတွက် ဝေါပုံလေးတွေလန်းတယ်ဗျာ
Website တစ်ခုကို Android Phone တွင်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Application တစ်ခု ဖန်တီးနည်း
သမ္မတရုံးသို့စာပို့ရန်လေးတင်နည်း ( c-box တောင်းဆိုမှု)
မန်ဘာဝင်ရန်ဆိုတဲ့ join this site လေးလုပ်နည်း
ဘလော့ပို့စ်တွေကို Facebook ပေါ်ရှယ်နည်း( c-box တောင်းဆိုမှု)
boyfriend 27 April 2014 at 07:08
အကို ရေ လိုချင်တဲ့ ဟာတွေ အကုန်လုံးဒီမှာရှိနေပါလားဗျာ သေပြီ အကို တစ်ခုလောက်မေးချင်တယ် အဲကောင်တွေကို စာအုပ်လို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး ဖတ်လို့ရမလား။
ခုလိုအပင်ပန်းခံပြီးတင်ပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပြီး ဒိထက်မကပညာတွေဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါစေလို့ ရင်တွင်းစကားဆိုပါရစေ
theintoe aung 27 February 2016 at 01:50
link error တက်နေတယ် bro